ngwọta maka ọgwụ
AHA: Gentamycin Sulphate 10% injection mejupụtara: Gentamycin Sulphate Ọgwụ ọ bụla ml nwere Gentamycin sulphate 100mg agwa: colorless ma ọ bụ fọrọ nke nta ka colorless doro anya mmiri mmiri. Pharmacological: pharmacological mmetụta nke a ngwaahịa na a dịgasị iche iche nke gram-adịghị mma bacteria (dị ka E. coli, Klebsiella, Proteus, pseudomonas aeruginosa, Pasteurella, Salmonella, wdg) na Staphylococcus aureus (gụnyere mmepụta n'ime β- amide fungal pụta) nwere antibacterial mmetụta. Kasị streptococci ...
Gentamycin Sulphate Ọgwụ
Onye ọ bụla ml nwere Gentamycin sulphate 100mg
colorless ma ọ bụ fọrọ nke nta ka colorless doro anya mmiri mmiri.
Pharmacological mmetụta nke a ngwaahịa na a dịgasị iche iche nke gram-adịghị mma bacteria (dị ka E. coli, Klebsiella, Proteus, pseudomonas aeruginosa, Pasteurella, Salmonella, wdg) na Staphylococcus aureus (gụnyere mmepụta n'ime β- amide fungal pụta) nwere antibacterial mmetụta . Kasị streptococci (streptococcus pyogenes, streptococcus pneumoniae, streptococcus faecalis, wdg), anaerobic bacteria (Bacteroides ma ọ bụ Clostridium), Mycobacterium ụkwara nta, rickettsial na fungi eguzogide ndị kemịkal.
Eji maka septicemia, urogenital-efe efe, akụkụ okuku ume na tract-efe efe, eriri afọ na-efe efe (gụnyere peritonitis), biliary tract-efe efe, mastitis na akpụkpọ adụ anụ ahụ na-efe efe, na-abụghị etinye obi gị dum site na onu, na-eji maka nsia-efe efe.
ime ka vestibular dysfunction bụ ihe nkịtị, ma na-eme ka reversible gbasara akụrụ toxicity, nke na ya ìgwè ke gbasara akụrụ cortex metụtara. Mgbe ụfọdụ nfụkasị Jeremaya.
cat ọzọ bụ chebaara kemikal, constants nwere ike ime ka ọgbụgbọ, vomiting, salivation, na ataxia.
neuromuscular igbochi mmetụta mgbe kpatara oké doses ime ka. Nwamba, nkịta general ná Nkụnwụ ịwa ahụ, nkwonkwo ojiji nke penicillin, streptomycin igbochi ọrịa mgbe, mgbe mgbe, na-atụghị anya ọnwụ, nke bụ n'ihi na a n'ozuzu anestetiiki na a muscle relaxant aka na mmetụta nke neuromuscular mgbochi.
Ogologo oge eji nwere ike ime ka akụrụ mebiri.
Otu dose, 2 ~ 4mg kwa arọ ahụ maka anụ ụlọ, 3 ~ 5mg maka nkịta na nwamba, ugboro abụọ n'ụbọchị
, 2 ~ 3days nọgidere.
Ọ nwere ike na-achọkwa na carbenicillin ọgwụgwọ nke oké oyi baa, ma e nwere incompatibility na vitro.
Ngwaahịa a jikọtara na penicillin, streptococcus a synergistic mmetụta.
Nwere akụkụ okuku ume na ịda mbà n'obi, na-igba ogwu n'akwara ogwu ogbugba.
Gentamycin Ọgwụ (Veterinary were naanị)
Onye ọ bụla ml nwere Gentamycin 100mg
10ml / 20ml / 50ml / 100ml kwa mkpọ
Ehi, ufe, Atụrụ, Ịnyịnya, Ezi, Ehi, Kamel, Dog, Cat.
Eriri afọ na akụkụ okuku ume na-efe efe mere site gentamycin mwute bacteria, dị ka E. coli, Klebsiella, Pasteurella na Salmonella spp., Na umu-ehi, anu-ulo, ewu, atụrụ na ezì.
Ọnụọgụ ọgwụ andAdministration
N'ihi na intramuscular ochichi General: Ugboro abụọ kwa ụbọchị 1 ml. kwa 20 - 40 n'arọ. arọ ahụ ruo ụbọchị 3.
Nkebi Gentamycin Sulphate 10% injection
ngwaahịa aha Gentamycin Sulphate injection
n'ọrụ Efrata Gentamycin Sulphate Ọgwụ Onye ọ bụla ml nwere Gentamycin sulphate 100mg
ngosi Gentamycin Sulphate Ọgwụ Ji maka septicemia, urogenital-efe efe, akụkụ okuku ume na tract-efe efe, eriri afọ na-efe efe (gụnyere peritonitis), biliary tract-efe efe, mastitis na akpụkpọ adụ
anụ ahụ na-efe efe, na-abụghị etinye obi gị dum site na onu, na-eji maka nsia-efe efe.
Onunu ogwu ochichi Gentamycin Sulphate Ọgwụ Intramuscular injection
CATEGORY Gentamycin Sulphate Ọgwụ antibacterial ọgwụ
ndọrọ ego N'OGE Gentamycin Sulphate Ọgwụ Ezi: 40days
akpachara anya Gentamycin Sulphate Ọgwụ Ngwaahịa a nwere mmetụta nke akụkụ okuku ume na ịda mbà n'obi, ọ na-apụghị agbara intravenously
lekwasịrị Animal Gentamycin Sulphate Ọgwụ ezi aturu ehi
Previous: Flunixin Meglumine Ọgwụ
Next: Iron dextran Ọgwụ
Animal Niutrition Mmeju
antibacterial ọgwụ ọjọọ N'ihi Animals
Best-ere Ákwà Veterinary Medicine
disinfectant N'ihi Animals
Gamithromycin ntụ ntụ
Ọgwụ N'ihi Veterinary
Livestock Ma okuko Special Drugs
okuko Veterinary Medicine
Veterinary Medicine Animal okuko Medicine
Arọ Gainer N'ihi Animal
Antidiarrheal Herbs ntụ ntụ
Iron dextran Ọgwụ
Fenbendazole ntụ ntụ
Lincomycin Hydrochloride Ọgwụ